Nkwupụta November - Meteorology | Network Meteorology
Nọvemba bu onwa mgbanwe. Anyị wee site na inwe oge obi ụtọ ruo ụbọchị ndị na-ajụ oyi, na-ezo ma dị mkpụmkpụ. N'etiti mgbụsị akwụkwọ, osisi na-amịpụta ahịhịa na-achacha acha odo odo, ọbara ọbara ma ọ bụ oroma, na-eme ka ha maa mma. Immụ anụmanụ na-agbasi mbọ ike ịnakọta ọtụtụ nri dị ka o kwere mee, a na-amanye ụmụ mmadụ ịmalite iwepụ uwe na-ekpo ọkụ.
Dị ka ọ dị na mbụ, kemgbe ọtụtụ narị afọ, a na-ekwughachi ụfọdụ nkebi ahịrịokwu taa na-eje ozi dị ka ihe nduzi iji mara ihe na-echere anyị. N'oge a, anyị ga-ahụ ihe november okwu.
1 Kedụ ka ihu igwe ga-adị na Spen na Nọvemba?
2 Okwu maka ọnwa nke ọnwa Nọvemba
Kedụ ka ihu igwe ga-adị na Spen na Nọvemba?
N’ọnwa a na Spen, a na-enwekarị ntakịrị ihe niile: na mgbago ugwu obodo ahụ, mmiri ozuzo na-etokarị oke, na ọnọdụ okpomọkụ na-ebelata nke ukwuu nke na mbụ frosts na snowfalls na-eme; n'ebe ndịda, n'aka nke ọzọ, enwere ike ịnwe sistemụ nrụgide dị elu nke na-echebe nwa oge ya pụọ ​​na oyi. Agbanyeghi, ee, n'abalị, ọ na-ajụkarị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ókèala Spanish, ya mere ọ ga-adị mkpa iji wepụta blanket.
Oge nke ehihie na-akawanye mkpụmkpụ, ehihie na abalị na-akawanye njọ, nke mere na, yana ikuku na-arịwanye elu, ndị na-achọ ịpụ na-achọ ero na ugwu ga-enwe ọ enjoyụ .
Ka anyị mara ihe banyere isiokwu a site na okwu.
Okwu maka ọnwa nke ọnwa Nọvemba
Mgbe ọnwa Nọvemba gwụ, oyi na-amalite: ma ọ bụ eziokwu. Ozugbo ọnwa nke iri na otu n’afọ gwụchara, oge eruola iwepụ, ee ma ọ bụ ee, mkpuchi ndị ahụ ma ọ bụrụ na ị nọ n’ebe ugwu, ma ọ bụ jaketị ahụ ma ọ bụrụ na ị nọ n’ebe ndịda, ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ na-adịkarị oyi iji nọgide na-eyiri uwe ọhụrụ.
Site n’abalị iri-abụọ nke Nọvemba gaa n’ihu, oge oyi adighi ama: malite n’ụbọchị ahụ gawa, ọtụtụ ma ọ bụ obere, n’ọtụtụ obodo Spanish, ọkachasị ndị nọ n’ebe ugwu, bụ mgbe snow mbụ na-amalite ịda, yabụ, oge oyi na-apụtawanye.
Maka San Andrés, ice n'ụkwụ gị: Saintbọchị Saint bụ Nọvemba 30, mgbe a hụlarị akpụrụ n'ọtụtụ akụkụ nke mba ahụ.
Enterbanye na Nọvemba, ndị na-akụghị mkpụrụ anaghị agha mkpụrụ: Nke a bụ ọnwa mgbe ọ na-agaghị abụ ihe amamihe dị na kụrụ ihe ọ bụla, ebe ọ bụ na oyi na-atụ nwere ike igbu mkpụrụ na mkpụrụ ụbọchị ole na ole.
Oge ọkọchị nke San Martín na-ewe ụbọchị atọ ma gwụ: Saintbọchị Saint bụ November 11, nke bụ mgbe okpomọkụ na-adịkarị karịa ụkpụrụ nke ụbọchị ndị gara aga. Ma mgbe o mere, e nweghịzi “summers” maka afọ fọdụrụ n’afọ.
Site na Ndi-nsọ nile, oyi juru n'ọhia: All Saints ’Day bu November 1. N'ụbọchị ahụ n'ọtụtụ akụkụ nke obodo ọ malitere ịjụ oyi.
Ọ bụrụ na Nọvemba amalite nke ọma, obi ike ga-enwe: ọ bụrụ na ọnwa amalite nke ọma, ya bụ, ọ bụrụ na okpomoku dị ụtọ ma mmiri zoo amalite ịba ụba, ọ ga-abụrịrị ọnwa na-agaghị ewetara ihe ịtụnanya na-atụghị anya ya.
Ifufe na-ejegharị na San Martín, na-adịgide ruo ọgwụgwụ: ifufe nke nwere ike ịda na Nọvemba 11 na-adịkarị jụụ, ọ kachasị njọ n’ebe ụfọdụ.
Ọ bụrụ na ọ na-enwe snow na San Andrés, ọ na-enwe snow n’oge na-adịghị anya: ụbọchị nke Onye Nsọ bụ, dị ka anyị kwuru, November 30. Ọ bụrụ na snow na-ada n'ụbọchị ahụ, ọ ga-ekwe omume na ọ ga-ada ọtụtụ mmiri ọzọ n'ọnwa ndị na-abịanụ 🙂.
Maka San Andrés, abalị niile bụ: na ọ bụ ihe ọ nwere ike iyi, ee. Igwe ojii ma ọ bụ oge etiti igwe ojii, obere awa nke ọkụ ... o yiri ka abalị ahụ ọ na-agbatị karịa ka ọ na-eme.
November bụ ọkọchị ọnụ ụzọ oyi: a ghaghi iburu n'uche nke a. N'ime ọnwa a, anyị ga-agwurula ya nke ọma ruo oge ọzọ, ebe ọ bụ na ihu igwe ga-adị jụụ karịa.
Maka San Martín, ndị ukwu na ndị pere mpe yi uweSite na panorama a, ọ dighi ihe ọzọ kariri ịkọkọta nke ọma iji chebe onwe gị pụọ na ihu igwe adịghị mma.
Maka ndị-nsọ, Ugwu-elu-igwe n’elu-elu, na maka San Andrés, n’ụkwụ: Anyị malitere ọnwa site na snow na ọnụ ọgụgụ kasị elu, ma anyị ejiri ya na-ejedebe ya na elu ugwu.
Maka Santa Katalina, igbochi nkụ na ntụ ọka: ụbọchị nke Senti bụ Nọvemba 25, ụbọchị ọ ga-adị mma ma anyị nwee oke osisi iji gbaa ọkụ.
Maka Saint Eugene, akụrụngwa dị n'ọkụ, ọkụ n'ime ọkụ na atụrụ iji chebe: ụbọchị nke Onye Nsọ bụ November 15. N'etiti ọnwa, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịchekwa ụmụ anụmanụ, nri na nkụ.
You ma okwu ihu igwe ọ bụla ọzọ maka ọnwa a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » November kwuru
Gịnị bụ oke mmiri ozuzo kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme?